1aviagem.com - Mazano, mabvunzurudzo, nhau dzinotaurirwa nekutanga-nguva yemamateur
Mazano, nhaurirano, nhau dzinotaurwa nekutanga-nguva yemuiti
Nei zita iri?
North neCentral America
Yedu Yemagariro Networks
Vhura widget pamusoro
Costa Rica Nyika iyo yakaita sarudzo chaiyo!
Costa Rica, iyo nyika yakaita sarudzo chaiyo! Ah! Costa Rica, nyika ino iyo parwendo rwangu rwekutanga ikoko yakandishamisa pamusoro pezvaitarisirwa! Uye ndeipi sarudzo chaiyo yavakaita? Ndinokuudza izvozvi. Zvakadii nezvekufamba panguva yePandemic? Tisati tataura nezve Costa Rica…
verenga zvakawanda Costa Rica Nyika iyo yakaita sarudzo chaiyo!
United Kingdom, Nyika yeiyo 5am tii uye nzvimbo isinganonoke!
Nhasi tichataura nezveUK, iyo nyika inozivikanwa neayo 5:00 pm tii, uye usanonoka! Kusvika muLondon ndichibva kuHeathrow International Airport parwendo rwangu rwekutanga kuUK, zvaive zvatokwanisika kuona chimwe chinhu chakanakira vashanyi. Nhandare yakabatana nechitima chepasi pevhu. Uye kupi…
verenga zvakawanda United Kingdom, Nyika yeiyo 5am tii uye nzvimbo isinganonoke!
Belgium - nyika yakanaka kuverenga ma comics, uku uchinwa doro uye uchidya machokoreti
Nhasi tichataura nezveBelgium, nyika iri nezve ma comics, doro uye machokoreti. Ndinovimba kuverenga kwacho kunofadza! Mukupedzisira isu tichava nechishamiso (chete chemaBrazil, izvozvi). Antwerp - guta guru remadhaimani Nzvimbo yakanaka yekuenda kuBelgium. Kana zvichibvira, ndinokurudzira chitima, nekuti watove mu…
verenga zvakawanda Belgium - nyika yakanaka kuverenga ma comics, uku uchinwa doro uye uchidya machokoreti
Ndeapi mibairo yeNobel inokodzera amai vako? - Mhuri yekwaCurie yakagadzwa kanenge 2 - Poland neFrance
PaZuva raAmai iri ndinoda kusimudza mubvunzo unotevera: Mangani maNobel Prize ayo amai vako vanokodzera? Ini ndinofunga kuti zvekungotipa chipo chehupenyu, iye akatokodzera imwe, imwe yacho inouya kuzotitsigira kudzamara tava nehushingi nekufamba nemakumbo edu pachedu. Zvakanaka, mhuri yekwaCurie yakagadzira kanenge 2…
verenga zvakawanda Ndeapi mibairo yeNobel inokodzera amai vako? - Mhuri yekwaCurie yakagadzwa kanenge 2 - Poland neFrance
Nei makambani eBrazil achifanira kuomerera kune ESG - Environmental Social Governance pfungwa, uye kuti ingabatsira sei munhu wese.
Chii chinonzi ESG? Pfungwa yeESG chiyero pakati pekatatu: Zvakatipoteredza, Zvemagariro uye Kutonga kwebhizinesi. Mune iyi mibvunzo tinogona kuratidza kuti sei: Zvakatipoteredza: Mubvunzo wezvakatipoteredza unosanganisira: shanduko yemamiriro ekunze, zviwanikwa, kusvibiswa, marara uye zvipenyu zvakasiyana. Zvemagariro: Muhunhu hwemagariro tinogona kuratidza: hukuru hwevanhu, mikana yemagariro,…
verenga zvakawanda Nei makambani eBrazil achifanira kuomerera kune ESG - Environmental Social Governance pfungwa, uye kuti ingabatsira sei munhu wese.
Rwendo rwekutanga kuenda kuAustria - Nyika yakashandura nyika - Vienna
Kutora mukana wekuisa wega (nekuda kwe COVID-19) kugadzirisa iyo blog. Rangarira, kana urikubuda, pfeka chifukidzo, kana uchikwanisa kubaiwa jekiseni nekuterera mirau yehutano Tataura izvozvo, tiri kuenda kunoshanyira Austria? Chido Chinhu chekutanga kuchengeta mupfungwa ndechekuti muAustria mutauro mukuru chiGerman. Asi mira…
verenga zvakawanda Rwendo rwekutanga kuenda kuAustria - Nyika yakashandura nyika - Vienna
Netharenzi? Holland yakakwira mwero uye zvakasiyana
Uye kutora mukana wekuisa wega, ngativandudzei iyi blog zvishoma. Zano rakakura nderokudzokorora iro pikicha album. Uye zviongorore, izvo zvingangodaro zvaive "rwendo kuenda kumberi", uye kune yakasikwa tsika! Hongu, nhasi tichataura nezveHolland, nyika inodzidzisa zvakanyanya muzvidzidzo zvese. Holland iri…
verenga zvakawanda Netharenzi? Holland yakakwira mwero uye zvakasiyana
Kutanga rwendo kuenda kuLithuania - Vilnius - Kuona shamwari dzakanaka
Chii chakanyanya kundifadza? Kusangana neshamwari yangu yekuBelarus, iyo, kunyange yaive nepamuviri, yakayambuka muganho kungoona shamwari yayo yekare yeBrazil zvekare, ichi chiitiko chakasarudzika. Uye akauya nezvipo zvakawanda! Pini uye kadhi repositi kubva kuMinsk, uye mamwe madhora kubva kuBelarus rombo rakanaka. (Ah uye makuki…
verenga zvakawanda Kutanga rwendo kuenda kuLithuania - Vilnius - Kuona shamwari dzakanaka
Nei Prague iri imwe yenzvimbo dzakanakisa dzekushandisa Halloween? - Czech Republic
Tinoziva kuti Gumiguru 31 inoonekwa seHallowen, kana kuti Halloween, zororo risati rave chikamu chekarendari yeBrazil, asi inopembererwa munzvimbo dzakasiyana dzepasi. Kuno kuBrazil tine 02 yaNovember, zororo uye zuva revakafa. Asi nei Czech Republic…
verenga zvakawanda Nei Prague iri imwe yenzvimbo dzakanakisa dzekushandisa Halloween? - Czech Republic
Ko maMayan nemaAztec anotidzidzisei nezve denda iri? - Mekisiko
VaMayan nemaAztec, kunyangwe mushure memazana emakore, vachiri kutidzidzisa zvakawanda! Kana tikatarisa pane imwe nhoroondo diki tinogona kudzidza uye kusadzokorora zvimwe zvikanganiso. Wakambozvibvunza here kuti nei maEuropean akatonga America uye kwete imwe nzira yakatenderedza? Zvakanaka, kana iwe ukapindura uyu mubvunzo nekutaura kuti imhaka yekuti…
verenga zvakawanda Ko maMayan nemaAztec anotidzidzisei nezve denda iri? - Mekisiko
Sei nyika yaSanta ichitonhorera kudaro? - Finland - Helsinki
Ndinoziva kuchine zvishoma pamberi peKisimusi, asi ini ndaida kunyora nezvenyika yaSanta Claus uye wadii kutaura nezverwendo rwangu rwekutanga ikoko? Saka ngatitaurei zvishoma nezve veFinnns, vanhu vanoshanda uye vanotsigira. Ndakasvika sei kuFinland? Wangu wekutanga…
verenga zvakawanda Sei nyika yaSanta ichitonhorera kudaro? - Finland - Helsinki
Zviri sei kubhururuka neQatar Airways, uye Doha airport.
Inobhururuka sei neQatar Airways? Iwe unoziva iwo mukana unowoneka muhupenyu hwako uye usingagone kudzokororwa? Ndizvozvo, urwu rwaive rwendo rwangu rwekutanga neQatar Airways. Iyo script yaive yatogadzirira kuAsia, asi nekuda kwekumanikidza majeure zvaive zvisingaite kupedzisa zvemuchadenga, izvo…
verenga zvakawanda Zviri sei kubhururuka neQatar Airways, uye Doha airport.
Uruguay nyika yakasiyana neSouth America. - Montevideo
Ndichitora mukana wenguva yemahara munzvimbo iyi yekuisa vanhu, ndakafunga kuona mafoto kubva kushanyo dzekare uye… ndakaona kuti ndine zvimwe zvinhu zvekuvandudza blog kupfuura zvandaifungidzira. Saka nhasi ndicha taura zvishoma nezve Uruguay. Nyika yakasiyana zvakanyanya neSouth America, uye nei? Nekuda kwemitemo yavo yeruzhinji. Mu…
verenga zvakawanda Uruguay nyika yakasiyana neSouth America. - Montevideo
Kubvunzurudza neBrazillia, sei chiitiko chekuchinjana? - Firenze - Itari
Chii chiri chiitiko cheShanduko? Nhasi tichakuunzirai zvishoma nezve izvo chiitiko chekufunda kunze kwenyika zvakaita. Kuti ndiite izvi ndichavimba nerubatsiro rwaThereza. Zvakanaka, takasangana paakauya kuBrasilia kuzopemberera zuva rekuzvarwa kwehanzvadzi yake. Akatora chikamu muchirongwa che “Science without Borders” uye aive neakakura…
verenga zvakawanda Kubvunzurudza neBrazillia, sei chiitiko chekuchinjana? - Firenze - Itari
Kuruboshwe vs. Kurudyi fungidziro, nei zvisingaite kutsanangura kuti uri kudivi ripi?
Munguva pfupi yapfuura muBrazil pakave nekutaura kwakawanda pamusoro peanofungidzirwa sehondo yemafungiro, pakati pevanhu vanofunga "nenzira kwayo" kurwisa vanhu vanofunga "vakasara kuruboshwe". Asi unoziva here kuti anorevei mazwi aya? Tisati tatanga, ngatione kuti aya mazwi akabva kupi. Kwakatangira kuruboshwe uye kurudyi.…
verenga zvakawanda Kuruboshwe vs. Kurudyi fungidziro, nei zvisingaite kutsanangura kuti uri kudivi ripi?
Uri kutenga muCiudad Del Este kwakakosha here? - Paragwayi
Zvakanaka vanhu, sezvo tiri muga mega, ndakafunga kuongorora mamwe mapikicha ekare uye pakati pawo ndakawana imwe yerwendo rwangu rwekutanga kuParaguay. Uye ndakafunga: Wow, vanotaura zvishoma nezveParaguay, sei ndisingataure zvishoma nezvazvo? Uye heino mhedzisiro. Zviri kupi? Paraguay iri muSouth America ...
verenga zvakawanda Uri kutenga muCiudad Del Este kwakakosha here? - Paragwayi
Kubuda - Brasilia - Brazil
Kune gumi ne10.114 vakafa musi wa09 / 05/2020 (uye vachisimuka), izvi chete nekuda kwe COVID-19. Ko iyo yakakanganiswa curve yakakwira zvakaringana kune avo vaida kuona iyo yepamusoro yeiyo curve? Unochengetedza sei hupfumi nevashandi vakafa? Iwe unokwezva sei vekunze vatengesi kana iwe uchida kubatanidza mufananidzo wavo nerufu? Ivo…
verenga zvakawanda Kubuda - Brasilia - Brazil
Rwendo rwemazuva matatu rweBariloche - Argentina
Rwendo rwemazuva matatu rweBariloche - Argentina Uye munguva ino yekuisa chega chinhu chiri nani pane kutora dambarefu uye kutarisa mifananidzo. Izvo zvakandidzosera parwendo rwangu rwekutanga kuBariloche, iri kuArgentina. Ndakagara mazuva matatu chete muguta, uye ndakakwanisa kubata zviteshi zviviri. Zuva nechando. Uye…
verenga zvakawanda Rwendo rwemazuva matatu rweBariloche - Argentina
VaMayan uye fungidziro yekuguma kwenyika - Mexico
Chii chingatidzidziswe nema Mayan nezvekuguma kwenyika? Imwe nguva yapfuura, muna 2012, vanhu vazhinji vakanzwa nezvekuguma kwenyika. Uye zvakawanda zvekufungidzira zvakasimudzwa zvakatenderedza budiriro yeMayan. Mushure mezvose, runyerekupe rwakati maererano nekarenda yaMayan, nyika yaizoperera muna…
verenga zvakawanda VaMayan uye fungidziro yekuguma kwenyika - Mexico
Pilanesberg Park - foto safari uye mhuka zvidzidzo - South Africa
Mhoroi varume, iyi posvo ichave musanganiswa wemazano uye hunhu hwemhuka hwandakadzidza murwendo rwangu rwekutanga kuSouth Africa.Mazano eKruger Park Vazhinji vanhu vanofunga nezvekuenda kuSouth Africa, kana avo vanga variko vanofunga kuita mutambo wemifananidzo kutyaira safari. THE…
verenga zvakawanda Pilanesberg Park - foto safari uye mhuka zvidzidzo - South Africa
Takabvunzurudza mukadzi wekuMexico uye akauya neCoronavirus Kurudziro uye Matipi kuMexico
Isu takabvunzurudza mukadzi weMexico uye takaunza Mazano nezveiyo Corona Virus uye Matipi nezveMexico! Ndakasangana naIrika pakudya kwemanheru muRio de Janeiro. Uye akabatana neboka redu rekushanya uye isu takagovana tafura imwechete. Érika ainetseka zvishoma nezvekuti tafura yedu yaive yepasi rose sei. Takanga tine vanhu ...
verenga zvakawanda Takabvunzurudza mukadzi wekuMexico uye akauya neCoronavirus Kurudziro uye Matipi kuMexico
Zvinoita sei kuve nerusununguko rweveruzhinji rwemahara? - Estonia - Tallinn
Parwendo rwedu rwekutanga kuenda kuTallinn, guta guru reEstonia, patakasvika panhandare yendege yepasi rose takashamiswa nendege isina kujairika. Muchokwadi icho chaitaridzika ndechekuti yaive yakagadzirirwa kuve imwe yenzvimbo dzinotonhorera uye dzinofadza zvikuru kuvemo. Ndinoreurura kuti mukati merwendo rwangu nhandare shoma dzinoita sedziri…
verenga zvakawanda Zvinoita sei kuve nerusununguko rweveruzhinji rwemahara? - Estonia - Tallinn
Zvitsva zveGaborone - Botswana
Zvekuita kuGaborone - Botswana Parwendo rwangu rwekutanga ku Africa ndakafunga kuyambuka muganho uripakati peSouth Africa neBotswana. Mushure mezvose, Brazil iri kure zvishoma nekondinendi yeAfrica. Saka zvaiita senge zano rakanaka kuyambuka muganhu uone kuti Botswana yakaita sei…
verenga zvakawanda Zvitsva zveGaborone - Botswana
Tinogona sei kuhwina Hondo yenyika yechitatu? Mhinduro yacho inogona kunge iripo kwauri.
Nzira yekukunda sei Hondo Yenyika III neboka revashanyi?
verenga zvakawanda Tinogona sei kuhwina Hondo yenyika yechitatu? Mhinduro yacho inogona kunge iripo kwauri.
South Africa .. Kutaurirana nemuSouth Africa. Uye pakanga paine shanduko isingatarisirwi pakati pekubvunzurudzwa.
Ndisati ndatanga ini ndinofanira kuti hurukuro iyi yakaitwa zvachose. Isu takanga tisina nguva yekufunga nezve script uye zvaiitwa chete nesimba rekuda. Pana Lexiegh's pachake zano. Aida chimwe chinhu chechokwadi! Nzira yakanakisa yekuzadzisa izvi ndeyokuzviita seizvi, uchishandisa nhare kutora uye…
verenga zvakawanda South Africa .. Kutaurirana nemuSouth Africa. Uye pakanga paine shanduko isingatarisirwi pakati pekubvunzurudzwa.
Iyo Knights Templar Yaivapo here?
Nyaya huru kubva kune yekare kondinendi.
verenga zvakawanda Iyo Knights Templar Yaivapo here?
Chii chekushanyira muRiga? Guta rinobatanidza zvivakwa zvitsva uye zvekare - Latvia
Zvakanaka, ndisati ndataura nezve Riga pachayo, sei ndakagumira ipapo? Mukuda kushanyira nyika dzese dzepasi, kana angangoita mazhinji, Latvia yaive pakati penzira, uye pakati penzira paive neLatvia. Pakati peEstonia neLithuania.😎 To my surprise the passage of…
verenga zvakawanda Chii chekushanyira muRiga? Guta rinobatanidza zvivakwa zvitsva uye zvekare - Latvia
1- Nei ndichikurudzira Banco Inter? Kana iwe uchida iyo yekuongorora yeBrazil account, chero chikonzero, kungave nekuti unogara pano muBrazil, kana nekuda kwebasa, kana kuuya kuzodzidza, kungave nekuda kwekushanya, kana kutumira kana kugamuchira mari kubva kunze kwenyika ku zano nderekuti…
verenga zvakawanda Inter Bank
Luxembourg - yekupedzisira Grand Duchy yeNyika
Luxembourg inyika diki muEurope, yakavakidzana France, Belgium neGerman. Uye nei zvakakodzera kushanya? Nekuti ndiye wekupedzisira Grand Duchy munyika. Uye iwe unogona kuzvibvunza iwe: chii chinonzi Grand Duchy? Mhinduro yakapusa: inyika, iyo pachinzvimbo chemutungamiri akasarudzwa, ine muchinda mukuru uyo…
verenga zvakawanda Luxembourg - yekupedzisira Grand Duchy yeNyika
Sezvakavimbiswa mune yekupedzisira posvo, ini ndichataura nezvechisere kondinendi. Uye kondinendi yechisere iripi? Inogara pamusoro pemisoro yedu. Muchadenga, muPasi Orbit! Mukutsvaga mifananidzo yesatelite kuti uzive saizi yemoto muBrazil yese. Ndokunge, kusanganisira iwo matanhatu makuru eBrazil biomes ...
verenga zvakawanda Continental Continent
Ko kana ndikakuudza kuti kwedu (vanhu) Nyika yakawana kondinendi yechinomwe? Hongu, nhau dzinotaridzika zvakanaka, asi zvinosuwisa kuti hadzisi. Nekuda kwemarara akaunganidzwa mumakungwa anotakurwa nemafungu egungwa uye anopedzisira aunganidzwa mune imwe nzvimbo muPacific Ocean pakati peCalifornia neHawaii ...
verenga zvakawanda Continent Continent
Matipi ezvokuita muBarcelona
Barcelona yakanaka kune avo vanofarira zvivakwa zvisina kujairika. Iwo mafaçade uye zvemukati mevashanyi nzvimbo dzakanyorwa pazasi zvinonyatso kuunza yakasarudzika uye kunze kweiyo mraba ruzivo kune chero mushanyi. Kana urwu ruri rwendo rwako rwekutanga kuenda kuBarcelona tevera aya matipi: 1- Mutauro: Chinhu chekutanga chauchacherekedza ...
verenga zvakawanda Matipi ezvokuita muBarcelona
Mutero kuna Notre-Dame
Ini handizive kuti ndotanga sei iyi posvo, saka ini ndichakuudza iri pfungwa yake. Iri kubhadhara mutero kuName-Dame Cathedral, iyo yakavezwa moto muna Kubvumbi 15, 04. Icho chinhu chakatamisa vanhu vazhinji, pamusoro penyonganiso uye kusuwa kunounzwa nechokwadi. Kwangu uyo ​​aifamba achienda kuFrance neshamwari uye…
verenga zvakawanda Mutero kuna Notre-Dame
Nzira yekutenderera sei Paris?
Sezvakavimbiswa mune yapfuura posvo, nguva inotevera pandinoenda kunotaura nezveParis ini ndinounza mamwe matipi pano kwauri. (Iko kunyorera kwandinoita ichi chivimbiso ndeichi) Zvakanaka saka inguva yekuchengeta vimbiso. Chinhu chekutanga chaunofanirwa kuita kutsanangura kwaunotangira ...
verenga zvakawanda Nzira yekutenderera sei Paris?
Ko caineine uye cocaine zvinodhaka zvinorambidzwa here?
Mutsamba yapfuura takaita hurukuro nemukadzi wePeruvia uye mushanyi weBrazil nezvePeru. (Unogona kuwana iyi hurukuro huru nekudzvanya apa). Nekuda kwake ndakafunga kuunza kuda kuziva nezvePeruvia coca tii. Coca tii Yekutanga kuda kuziva ndeyekuti coca tii inotorwa ipapo ...
verenga zvakawanda Ko caineine uye cocaine zvinodhaka zvinorambidzwa here?
Sei chiFrench chichigadzirisa maziso avo paunotaura Chirungu uye izvi zvine chokuita nevaBrazil?
Nhasi tichataura nezvemitauro uye nei maFrench achiunyana pamhuno pavo patinotaura Chirungu navo. Zvakanaka, vangangoita vanhu vese vandakataura navo nezveFrance, uye vanga varipo, vanogara vachitaura zvinhu zviviri: Kuti pane yakanaka, inoshamisa nzvimbo. Uye kuti veFrance vanounyana pamhino dzavo kana iwe ...
verenga zvakawanda Sei chiFrench chichigadzirisa maziso avo paunotaura Chirungu uye izvi zvine chokuita nevaBrazil?
Bhalisa kune blog ne email
Isa yako email kunyorera kune ino blog uye ugamuchire zvinyorwa zvitsva.
kubudikidza Pro Musoro Wokugadzira
Yakavharwa widget pamusoro
Ramba ne Facebook
Ramba ne Google
White ipes musi wa07 Gunyana ... Ndatenda nekutipa iri rakakosha meseji yerunyararo.
Munguva dzakaoma ita kunge # ipê iyo kunyangwe mune # yakaoma # maruva uye inochera mvura kubva pasi petsime neayo # midzi yakasimba kuti igare yakamira. Uye zvinotogadzira # mumvuri kune avo vasingatombovarangarire kana ivo vasina kutumbuka. Ndatenda ipes. # funga nezvazvo
Tarisa yedu #dake re # shiri dzinoita # budiriro
Pinda e-mail yako kuti ubhadhare kune iyi blog uye ugamuchire zviziviso zvemabhuku matsva ne email.
Join 240 dzimwe subscribers